Mgbapụta COVID-19: Mmetụta Mgbasa Ozi na Ahịa | Martech Zone
Mgbapụta COVID-19: Mmetụta Mgbasa Ozi na Marketingzụ ahịa
Monday, March 30, 2020 Monday, March 30, 2020 Kati Taylor
Ọ bara oke uru ịrụ ọrụ na ụlọ ọrụ na-ahụ maka mmelite ahịa dị mkpa n'oge niile. Dịka a na-amanye azụmahịa ọ bụla ime mgbanwe n'ihi ọnọdụ ụwa dị ugbu a na ahụike na nchekwa COVID-19, ọ pụtara inye teknụzụ zuru oke maka ndị ọrụ dịpụrụ adịpụ, na-agagharị na ọrụ kọntaktị efu mgbe o kwere omume, ma na-eme ka reins na mmefu azụmahịa.
Ebe a na-emefu dollar ahịa dị oké mkpa n'oge ndị a. Ndị ọchụnta ego ga-enwetakwa ihe iji gosi na ọ dị mkpa ma na-aga n'ihu na-enye ngwaahịa na ọrụ bara uru. Inwe ahụike na nchekwa, ka ị ghara ikpughe ọtụtụ folks na belata mgbasa nke nje ahụ, abụrụla ihe ọhụrụ. Enwere isi ihe ole na ole anyị ga-eme maka akụrụngwa dị.
Mmelite Dị Mkpa maka Akaụntụ Mgbasa Ozi Google
Onwere udiri mgbasa ozi diri Google Mgbasa ozi pere mpe na nke pere mpe! Google ekwuola na ha chọrọ inyere aka belata ụfọdụ ụgwọ maka obere azụmaahịa obere (SMBs) iji nọrọ na ndị ahịa ha n'oge nsogbu a. Ọ bụ ya mere ha ji enye anyị SMBs nde $ 340 na mgbasa ozi mgbasa ozi, nke enwere ike iji mee ihe ọ bụla ruo na njedebe nke 2020 n'ofe nyiwe Mgbasa Ozi Google anyị. Nke a bụ obere enyemaka maka azụmaahịa ndị ahụ na-ere ahịa na ndị na-ege ntị na Google Ads. Ndị SMB ndị na-akpọsa mgbasa ozi kemgbe mmalite nke 2019 ga-ahụ ọkwa nkwupụta na-egosi na akaụntụ Google Ads na ọnwa ndị na-abịanụ.
Mara: A ga-amara ndị mgbasa ozi na-anata ụgwọ mgbasa ozi.
Google nọ na-ewu ụlọ ọrụ ndị a pụrụ iche na akaụntụ Google Mgbasa ozi, ya mere ọkwa agaghị egosi ozugbo. Soro ndi otu ahia gi di iche na elele kredit ndia ma bido ugbu a na uzo di nma iji ha!
Ọzọkwa, ndị ọzọ karịa free ahịa si Google ma ọ bụ afọ ochie arụmụka nke ma ime Google mgbasa ozi ma ọ bụ mgbasa ozi Facebook anyị ga-arụtụ aka na ndị mmadụ na-aga na mgbasa ozi Facebook n'oge a.
Ulo oru di na Mgbasa ozi na Facebook
Maka na anyị niile na-anọ n'ụlọ, ọtụtụ mmadụ na-etinye oge na mgbasa ozi mmekọrịta yabụ na ọ bụ enweghị nsogbu na azụmaahịa chọrọ ịzụ ahịa ebe ahụ karịa. Site na profaịlụ ijeri 2.5 na Facebook, iwelata ma ọ bụ ịgbasawanye mgbasa ozi Facebook dị ka ọ ga-esi nweta ọkwa dị elu. Ọtụtụ ụlọ ọrụ na-achọ ọrụ ahịa ha anaghị enye na mbụ ma ọ bụ mee ka ndị ahịa mara banyere mgbanwe na usoro ha. Mgbasa ozi Facebook bụ otu ụzọ iji chụpụ ndị ahịa.
O nwedịrị oge igbu oge na ịnweta nkwado mgbasa ozi Facebook!
Ahịa Omnichannel na-anọgide na Bestzọ Kacha Mma
Gba mgbasa ozi ahịa dijitalụ naanị abụghị isi ihe ngwọta. Iji maa atụ, ọtụtụ azụmaahịa abawanyela mbọ azụmaahịa email yana ebe nkwukọrịta bụ isi, kpachara anya ka ị ghara ịnwa 'ire' ugboro ugboro ma ọ bụ bụrụ ihe na-emebi emebi ma tufuo ndị na-ege gị ntị. Maka imepụta ire ahịa email, a ga-enwerịrị usoro iji aka ya rụọ ọrụ na olu na-arụ ọrụ iji nweta ndị debanyere aha ọhụrụ. Omume kachasị mma ga-abụ inwe atụmatụ zuru oke iji tinye n'ọrụ ma nyochaa ọtụtụ ọwa ahịa.
Onweghi uzo ngha n’ete ahia obula. Nke ahụ pụtara na ọ bụ kpọmkwem maka ọtụtụ ihe dịka ụlọ ọrụ, ọnọdụ, ndị na-ege ntị, na oge. Ahịa Omnichannel ga-abụ usoro ahụike ahịa kachasị mma n'ihi na ọ na-enye nnukwu foto ma a bịa na nsonaazụ. Trachọpụta data sitere na ọwa niile dị ka o kwere mee ma ghọta na data ahụ ga-akpụzi mkpebi azụmahịa metụtara mmefu ahịa dijitalụ.
Tags: COVID-19facebook mgbasa ozifree google mgbasa ozigoogle ad kreditgoogle mgbasa ozi
Kati anọwo na ahịa dijitalụ ruo afọ 12. Ọrụ ọkachamara mbụ ya na kọleji bụ ijikwa mkpọsa ahịa email na ebe nrụọrụ weebụ na-ere ahịa / onye na-ekesa ihe ntanetị maka aha atọ mba ụwa. Kemgbe ahụ, ọ na-arụ ọrụ yiri nke ahụ. Na Ngwọta Azụmaahịa Elu, Kati bụ onye na-azụ ahịa dijitalụ na onye na-ese ihe osise.
Ndị ahịa ọ kwesịrị ikwenye na nkeonwe?